ATN: အာဇာနည်နေ့မှာ ကျနော် ၀မ်းနည်းပါတယ်ဗျာ
Yes. You are right too.
We can see and read each other in our hearts what is being happened and felt.
အာဇာနည်တွေ၊ နေ့ ထူးနေ့ မြတ်တွေိကု ရင်ဘတ်ထဲ ထည့်ဖို့ က ပိုခဲယဉ်းတဲ့ အလုပ်ပါအစ်ကို။ အစ်ကိုတို့ က ဘဝနဲ့ ရင်းပြီး သက်သေပြပြီးသား ဆိုတာ အားလုံးနားလည်ကြမှာပါ အစ်ကို။
ဘီယာဆိုင်တွေ မှာလည်း ဘုရားစင် ရှိတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ၇င်ထဲမှာ ဘုရားရှိဖို့ တော့ အရမ်းခက်တယ်အစ်ကို။
ပြီးတော့ အစ်ကို ပြောတာ ကျွန်တော် သဘောတူတယ်။ အနုပညာ သမားတစ်ယောက်ဟာ ရာသီစာတွေကို ဖျစ်ညှစ်ရေးရင် အနုပညာ အရည်အသွေး ကျသွားပြီ။ ဖတ်ရတဲ့သူအဖို့ လည်း အကျိုးမရှိဘူးလို့ ထင်တယ်။ ဖျစ်ညှစ်ရေးတာကိုပဲပြောတာပါ။ ခံစားချက်ကနေ စကားလုံးတွေ စီးကျလာတဲ့သူတွေကတော့ ရေးကြပေါ့။
အစ်ကိုပို့စ်ကို အပြည့်အ၀ယုံကြည်တယ်...။ ကိုကောင်းကင်ကြီး ပေးသွားတဲ့ ကွန်မန့်ကို ထပ်မံ ထောက်ခံတယ် အစ်ကို...။
ကျမလဲ အရင်ကတော့ ရေးပါတယ်။
ခု ... မရေးချင်တော့ဘူး။
စိတ်ထဲ ရှိနေရင်ပြီးတာပဲ။ ဘယ်သူ သိသိ မသိသိလေ။
အကို့ ကဗျာလေးတော့ သဘောကျပါတယ်။